चलचित्र 'तिमी सँग'को निर्माणपक्ष प्रदर्शन मिति सार्न वाध्य | News Nepal
चलचित्र ‘तिमी सँग’को निर्माणपक्ष प्रदर्शन मिति सार्न वाध्य
चलचित्र ‘तिमी सँग’को निर्माणपक्ष बारम्बार प्रदर्शन मिति सार्न वाध्य भयो । अब, भने यो चलचित्र चैत्र २३ गतेबाट देशभरका हलमा रिलिज हुँदैछ । चलचित्रको ट्रेलर काठमाण्डौमा आज एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै सार्वजनिक गरिएको छ ।
शिशिर राणाको निर्माण तथा निर्देशनमा तयार भएको चलचित्रमा साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाह, आकाश श्रेष्ठ र नाजिर हुसेन मुख्य भूमिकामा छन् । चलचित्रले त्रिकोणात्मक प्रेमकथालाई उठान गरेको छ । सुनिल बी।के यो चलचित्रबाट रजतपटमा प्रवेश गर्दैछन् ।
चलचित्रमा शिशिर राणा, साकार ओझा, समुन्द्र उप्रेती र सुशिल क्षेत्रीको पटकथा छ । सुशिल उप्रेतीको छायांकन रहेको चलचित्रमा कविराज गहतराज, रामजी लामिछाने र शिशिर खातीको कोरियोग्राफी छ । शिशिर राणाले नै चलचित्रको कथा लेखेका हुन् ।
‘रोमियो एण्ड मुना’ ट्रेलर रिलिज (भिडियोसहित)
काठमाडाैं ७, असार । फिल्म ‘रोमियो एण्ड’ मुनाको ट्रेलर रिलिज भएको छ । ट्रेलरमा रोमियोले मुना पाउनको लागी कान काटेको...
दीपिका-रणवीर बिहे गर्दै, कहिले गर्लान त ?
काठमाडाैं ७ असार । बलिउड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण र अभिनेता रणवीर कपुरको विवाहका बारेमा हुने गरेका अनेक चर्चालाई फेरि अर्को...
हास्ने होइन ? बुद्वि तामाङ ‘हैट’को कमेडी प्याकेज (भिडियोसहित)
काठमाडाैं ६, असार । चर्चित हाँस्यकलाकार बुद्वि तामाङ 'हैट'द्वारा अभिनित चलचित्रका हाँस्य सिनहरु हाइलाइट्स नेपालले युट्युब च्यानल मार्फत सार्वजनिक गरेको...
सेक्सको लत रोग हो या अरु केहि नै ? कारण यस्तो छ…
काठमाडाैं ५, असार । हामीले निकोटिन, रक्सी र लागुऔषधजस्ता नशालु पदार्थको लतलाई स्विकार गरेका छौं । यसले पुर्याउने क्षतीलाई पनि...
‘रेस ३’ ले तोड्यो सुल्तानको रेकर्ड, तीन दिनमै सय करोड
काठमाडाैं ५, असार । बलिउड सुपरस्टार सलमान खान स्टारर फिल्म ‘रेस ३’ले प्रदर्शनको तीन दिनमा नै १ सय करोड बिजनेसको...
भैरेको ट्रेलर सार्वनजिक, दयाहाङ र बुद्वि तामाङले मच्चाउलान त धुम ? (भिडियिसहित)
काठमााडाैं ४, असार । आगामी श्रावन ४ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउने‍ लागेको चलचित्र भैरेको ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । एभरेष्ट सुर्य...
काठमाडौँ, ४ असार। सरकारबाट कलाको विकासका लागि यथेष्ट सहयोग प्राप्त नभएपनि यस क्षेत्रको विकासको सम्भावना रहेको नेपाल कला परिषद्ले...
फिल्म नखेल्न अभिषेकलाई ऐश्वर्याकाे सुझाव
एजेन्सी । बलिउड अभिनेता अभिषेक बच्चनलाई फिल्महरुको अफर आइरदैन । बल्लबल्ल अभिषेक एउटा फिल्ममा अफर अाएतापनि उनकी पत्नी ऐश्वर्या रायले...